Pyae Phyo (MMiTD): December 2015
Fast Battery Charger.APK
When you click start , this app kills all the background processes which consume battery hence your charging is boosted . When you click exit , all the processes will auto resume.
Posted by Aung Kyaw
အမျိုးအစား: Andriod applications
♪ ကွန်ပြူတာမှာ Myanmar Font & Keyboard လိုအပ်နေသူများအတွက် - Windows Zawgyi ♫
Window မှာ Myanmar Font အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီး အဆင်ပြေတဲ့နည်းလေးတောင်းထားတဲ့အကို / အမတွေအတွက်ကျတော့်ရဲ့ကိုကြီး ကိုအောင်သူရ ရေးသားထားတဲ့ Window အတွက် Zawgyi ထည့်သွင်း နည်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ကဲ Window Myanmar Font အဆင်မပြေကြ သူများ လေ့လာလိုက်ကြပါအုံး ခင်ဗျာ။
98% တော့ အဆင်ပြေလိမ့်မယ် ..
Browser တွေမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ် ..
Application တွေမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ် ..
Download ( 310KB ) – http://www.mediafire.com/…/jc…/Windows-ZawGyi%28Light%29.rar
Zawgyi သုံးချင်ရင် Zawgyi Folder ထဲက Font2ခုကို install ပေးရင်ရပြီ ..
Unicode သုံးချင်ရင် Unicode Folder ထဲက Font2ခုကို install ပေးရင်ရပြီ ..
Keyboard Layout + Fonts
1. Zawgyi-Keyboard Folder ထဲက setup.exe ကို install ပါ .. ( ပြီးရင် restart ချ )
2. နောက်တစ်ခါထပ်ပြီး setup.exe ထပ် install ပါ .. ဒီတစ်ခါမှာ ” Repair Keyboard Layout ” ရွေးပေးပါ ..
3. Fonts Folder ထဲက Fonts တွေ install ပါ ( Unicode မပါ ) ..
4. Unicode ပြန်ပြောင်းချင်ရင် Unicode Folder ထဲက Font2ခု install ပါ ..
Download (2MB ) – http://www.mediafire.com/…/xad7…/WindowsZawgyi%28Full%29.rar
Credit >>> Ko Aung Thura
အမျိုးအစား: မြန်မာ Font Installer
အမျိုးအစား: Android Livewallpaper
2016 နှစ်သစ်တွက် အကောင်းဆုံး Live Wallpaper NewYears fireworks v2.1.4 APK
Android OS ဖုန်းဘော်ဒါတို့အတွက် 2016 နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုရန် အကောင်းဆုံး Live Wallpaper လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နှစ်သစ်လေးမှာ ကာလာပေါင်းစုံနဲ့ အတွေးအခေါ်များစွာနဲ့ ပြုပြင် change နိုင်ပြီး အေးချမ်းတဲ့ ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်စေရန် ဒီကောင်လေးကို ဒေါင်းသုံးလိုက်ပါဗျာ။ ဒီကောင်လေးမှာတော့ မီးပန်းတွေကို ကာလာအစုံ ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး မီးပန်းရဲ့ အလွန်သာယာပြီးကျက်သရေရှိလှတဲ့ပေါက်ကွဲသံတွေနဲ့ အတူ 2016 ကို သင့်ဖုန်းထဲကနေကြိုဆိုလိုက်ရအောင်...။
Live Wallpaper လေးကိုအောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
♪ Gionee က Marathon M5 Enjoy ကို ကြေညာ ♫
Gionee က Marathon M5 Plus နှင့်အတူ Marathon M5 Enjoy ကိုလည်း ကြေညာလိုက်ပါသည်။ မူလ M5 ၏ မျိုးဆက်များဖြစ်ကြပါသည်။ M5 Enjoy ၏ မျက်နှာပြင်သည် TFT အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မူလ M5 တွင် AMOLED အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ဖုန်းနှစ်လုံးစလုံး၏ မျက်နှာပြင်အရွယ်မှာ ၅.၅ လက်မဖြစ်ပြီး 720p HD Resolution ဖြစ်ပါသည်။
M5 Enjoy တွင် ကြာရှည်စွာ အသုံးခံသော 5000mAh Battery ထည့်သွင်းထားပါသည်။ 13MP Camera အစား M5 Enjoy တွင် 8MP Camera ကိုသာ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ M5 Enjoy တွင် Fingerprint Scanner တပ်ဆင်ထာါးသည်။
အခြား Specification များမှာ Quad-Core MediaTek MT6735 , 3GB RAM, Android 5.1 Lollipop , 16GB Internal Storage တို့ ထည့်သွင်းထားပါသည်။ Marathon M5 Enjoy ကို တရုတ်ယွမ် ၁၉၉၉ ( ဒေါ်လာ ၃၁၀) ဖြင့် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်သည်။
♪ ကာစီနို လောင်းကစားဂိမ်း - Slots Free Casino House of Fun v2.22 Apk ♫
လောင်းကစားဂိမ်းကိုမှ ဖုန်းထဲမှာ အပျော်ကစားချင်သူများအတွက် Slots Free Casino House of Fun ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကာစီနိုလောင်းကစားဂိမ်းဆိုရင်တော့ တော်တော်များများ ရင်းနှီးဖူးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ့်။ မကစားဖူးသေးလည်း ကစားကြည့်လိုက်ပါ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး ဒီဂိမ်း ကိုစွဲသွားလိမ့်မယ်ဗျ။ အဟဲ ........... ကစားချင်ရင်တော့ အောက်က Link မှာဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
♪ “Samsung Galaxy A9 ကိုမိတ်ဆက်” ♫
Samsung က တရုတ်မှာ Galaxy A9 ကိုကြေညာလိုက်ပါတယ်။ Galaxy A9 ဟာအရည်အသွေးမြင့် စမတ်ဖုန်း ဒီဇိုင်းများကို ထုတ်လုပ်နေတဲ့ Galaxy A Series ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ် စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်သင့် စမတ်ဖုန်းများထက် A Series များကအနည်းငယ်သာလွန် ကောင်းမွန်ပါ တယ်။
အနောက်ဘက်မှာဖန်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားပြီး သတ္တုဖရိမ်များ ပါရှိပါတယ်။ ခြောက်လက်မအရွယ် Full HD AMOLED Display တပ်ဆင် ထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ပတ် လည်ရှိဘေးဘောင်များဟာသေးငယ်ပြီး ၂.၇၄ မီလီမီတာသာအထူရှိပါတယ်။ Qualcomm Snapdragon 652 Chipset မောင်းနှင်မှာဖြစ်ပြီး 3GB RAM, 32GB Internal Storage တပ်ဆင် ထားပါတယ်။ microSD Card Slot လည်းပါရှိပါတယ်။ Galaxy A9 မှာ မျက်နှာပြင်ကြီးမားမှုကိုကာမိစေဖို့ ကြီးမားတဲ့ 4000mAh Battery တပ်ဆင် ထားပါတယ်။
လျင်မြန်စွာအား ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ QuickCharge နည်းပညာ ပါရှိပါတယ်။ Home Button မှာ Fingerprint Sensor ထည့်သွင်းထားပြီး Samsung Pay ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Samsung Pay ဟာ Samsung ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းမှ ငွေပေးချေနိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင် မှုဖြစ်ပါတယ်။ Google Android Pay, Apple Pay တို့နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Galaxy A9 မှာ Wi-Fi a/b/g/nပါရှိပေမယ့် ac ကိုထောက်ပံ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ Bluetooth 4.1 , NFC, GPS ဆက်သွယ်မှုများပါရှိပါတယ်။
Android 5.1 Lollipop ထည့်သွင်းမောင်းနှင်ထားပါတယ်။ Samsung က Galaxy A9 ရဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချမယ့် နေ့ရက်ကိုကြေညာခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ အနောက်ဘက်မှာ Optical Image Stabilization ပါတဲ့ 13MP Camera နဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ 8MP Camera တို့ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
♪ “Lenovo Vibe Shot” ♫
စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများသည်ကွဲပြားသောရည်ရွယ်ချက်များရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းမိမိတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်၍အသုံးဝင်သည့်ဖုန်းအမျိုးအစားများကိုသာ ရွေးချယ်ဝယ် ယူကြပါတယ်။အချို့သောသူတွေက အသံ ကြည်လင်သည့်၊လိုင်းဆွဲအားကောင်းမွန်သည့်ဟန်းဆက်များကိုရွေးချယ် ကြပြီးအချို့တွေကတော့ဖုန်းကိုယ်ထည်ပါးလျသည့်အမျိုးအစားကိုသာဝယ်ယူကြပါတယ်။ ရေစိုခံသည့်ဖုန်းများ ကိုအသုံးပြုသည့်စားသုံးသူများလည်း ရှိပါတယ်။စမတ်ဖုန်းကိုင်ဆောင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းကိုခုံမင်သူများအနေ ဖြင့်ကင်မရာ စွမ်းရည်ကောင်းသော ဖုန်းများကိုဝယ်ယူကြပါတယ်။သက်ဆိုင် ရာကုမ္ပဏီများသည်လည်းသူတို့၏စမတ်ဖုန်းများတွင်ကင်မရာအရည်အသွေးများကောင်းမွန်အောင်ပိုမိုကြိုး စား၍ထုတ်လုပ်ပေးနေကြပါတယ်။နည်းပညာပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍နာမည်ရသော Lenovo ကုမ္ပဏီသည်လည်း ကင်မရာ စွမ်းရည်ကောင်း သောဖုန်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးထားခြင်းကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကိုခုံမင်သည့်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများအဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ်။ Lenovo Vibe Shotသည် ဈေးနှုန်းတန်ဖိုးအားဖြင့်၃၉၀၀၀၀ိ/-၀န်းကျင် ရှိပါတယ်။အာမခံသက်တမ်း (၁)နှစ်ပေးထားတဲ့စမတဖုန်းပါ။ ဖုန်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းပြည့်ဝကောင်းမွန်မှုအသွင်အပြင်နှင့်ဒီဇိုင်းအဆင့်မြင့် ကင်မရာစသည့်အကြောင်းအရာကိုတစ်ပေါင်းတည်းရရှိနိုင်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး ပေါင်းစပ်ထားသောSmartphone ဖြစ်ပါသည်။
Lenovo ၏VIBE Shot ၏လုပ်နိုင်စွမ်းဖြင့်အမှတ်တရအချိန်တဒင်္ဂများစွာကို မလွတ်တမ်းမှတ်တမ်းတင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဓာတ်ပုံကင်မရာတစ်လုံး ကဲ့သို့တိကျကောင်းမွန် ပြတ်သားသောဓာတ်ပုံများကိုလျှပ်တစ်ပြက်အတွင်း ဖမ်းယူရိုက်ကူးနိုင်မည့်Shutter ခလုတ်ပါဝင်ပါသည်။ဖုန်းတွင်အသင့်တွဲဖက် ပါဝင်သောInfrared auto-focusing (AF) နည်းပညာသည်လည်း ပုံမှန် Smartphone ကင်မရာများတွင်ပါဝင်သောAutofocus များထက်နှစ်ဆ ကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံဖမ်းယူမှုများကိုစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သလို tri-color LED Flash ဖြင့်သဘာဝနှင့်ထပ်တူကျသောဓာတ်ပုံအရောင်အသွေး ကိုပါရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင်အလင်းရောင်နည်းပါးသော နေရာများ၊ညအချိန်များတွင် ရှင်းလင်းသေချာသပ်ရပ်သောဓာတ်ပုံများအား ရိုက်ကူးနိုင်ရန်အတွက်16:9 BSI Sensor အထောက်အပံ့ဖြင့်အရည်အသွေး မြင့်Low-Light ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးနိုင်စွမ်းနှင့်ကင်မရာရိုက်ချိန်တွင် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖုန်းအားလှုပ်ရှားမိ၍သော်လည်းကောင်း၊ ရိုက်ကူး နေသောအရာမှာရွှေ့လျားလျှင်သော်လည်းကောင်း ဓာတ်ပုံအရည် အသွေးေ၀၀ါးမှုများမရှိစေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးမည့် Optical Image Stabilization (OSI) နည်းပညာကိုပါထည့်သွင်းထား ပါသည်။ Screen အားတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့်ကင်မရာရိုက်ကူးမှုအားAuto Mode နှင့်Professional Mode (၂)မျိုးတွင် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သာမန်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုများအတွက်ဖုန်းတွင်အသင့်ပါသောSmart နည်းပညာများအသုံးပြု၍ရိုက်ကူးနိုင်ရန်"Point & Shoot" လမ်းညွှန်ပါဝင် သောAuto Mode ကို ရွေးချယ်နိုင်သလိုမိမိကိုယ်တိုင်ကင်မရာ၏Aperture, Shutter Speed, ISO Setting နှင့်အခြားနည်းစနစ်များကိုကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ် ၍ရိုက်ကူးနိုင်ရန်အတွက်Professional Mode ကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်း ကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းဝါသနာပါဝင်သူများအတွက်ပါ ရွေးချယ်နိုင် သောSmartphone ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးသော Panoramic Selfie ပါဝင်သောSmartphone ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လူအများ ဖြင့် Groupie ရိုက်ကူးလျှင်အလွယ်တကူရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။ဖုန်းစွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက်Qualcomm Snapdragon 615 processor နှင့်Octa-Core Chipset ကိုအသုံးပြုထား ခြင်းကြောင့်Multi Tasking လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းများ၊ အရည် အသွေးမြင့်HD Games များအားအထစ်အငေါ့မရှိဆော့ကစားနိုင်ခြင်းများကို ချောချောမွေ့မွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။3 GB RAM၏ ပေါင်းစပ် ထားမှု၊Internal Storage 32 GB ပါဝင်မှု၊ နောက်ထပ်128 GB အထိတိုးချဲ့ နိုင်သောSD Card Slot ပါဝင်မှုစသည့်အရည်အသွေးများသည်လည်း အကောင်းဆုံးသောစမတ်ဖုန်းအသုံးပြုမှု၏အတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ကင်မရာပိုင်းနှင့် ဖုန်းစွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းသာမကဖုန်း၏ ကိုယ်ထည်နှင့်ဒီဇိုင်းပိုင်းကိုပါအဆင့်မြင့်မားစေရန်ဖုန်း၏ကိုယ်ထည် အား Aluminiumအပြည့်အသုံးပြုထားပြီးမှန်အားအကြမ်းအတမ်းခံသောGorilla Glass အားအသုံးပြုထားပါသည်။
လေးထောင့်ကျသောအသွင်ဒီဇိုင်းရှိပြီးကင်မရာတစ်လုံးကဲ့သို့သော ပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်။၇ .၆မီလီမီတာသာထူတဲ့VIBE Shot သည်မည်သည့် အိတ်၊အိတ်ကပ်တွင်မဆိုအလွယ်တကူထည့်ယူသွားနိုင်ပါသည်။အလေးချိန်ကတော့145gပါ။Lenovo VIBE Shot သည်Carmine Red နှင့်Graphite Grey အရောင်(၂)မျိုးနှင့်အတူ နေ့စဉ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘ၀ကိုကောင်းဆုံး မြှင့်တင် ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။SIM Card (၂)ကတ်ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင် သောDual SIM ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးSIM Slot (၂)ခုလုံးတွင်မည်သည့် GSM/WCDMA SIM Card ကိုမဆိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 3Gကွန်ရက်အပြင်4G ကွန်ရက်ကိုပါထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။
♪ ဖုန်းဝင်လာရင် Flash မီးလေးတဖျက်ဖျက်လင်းပြီး သတိပေးမယ့် - Flash Alerts PREMIUM v2.2 Apk (24-Dec) ♫
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Application လေးကတော့ ပုံလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့ ဘော်ဒါတွေသိကြမှာဖြစ်ပါတယ် ဗျာ။ ဖုန်းဝင်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Message ၀င်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းရဲ့ Flash မီးလေးကနေ တဖျက်ဖျက်လင်း ပြီးသတိပေးမယ့် Flash Alerts PREMIUM v2.2 ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Flash မီးလင်းစေချင်တဲ့ Notification များကိုလည်း ရွေးချယ်ကန့်သတ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ Messenger မှ Message ၀င်ရင်မီးလင်းပြီး သတိပေးနိုင်အောင်သတ်မှတ်ထားနိုင်သလို Viber မှ Message ၀င်လာရင် မီးလင်းပြီးသတိမပေးဘဲနဲ့ လည်းသတ်မှတ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Incoming Call နဲ့ Incoming SMS တွေကိုလည်း ရွေးချယ်သတ် မှတ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ Setting ထဲကိုဝင်ပြီးကလိကြည့်လိုက်ပါလွယ်ပါတယ်။ နမူနာအနေနဲ့ အောက် မှာ Screen Shoot တွေရိုက်ပြထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ် ပါတယ်ဗျာ။
♪ Vivo မှဈေးနှုန်းသင့်တင့်မျှတတဲ့ - “Vivo Y28” ♫
စမတ်ဖုန်းရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီများဟာဈေးကွက်အတွင်းသူတို့၏ ဝေစု ပိုမိုရရှိစေဖို့အတွက် နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးဖြင့် Marketing ဆင်းကြပါတယ်။ အချို့ကုမ္ပဏီတွေကရှေ့ပိုင်းမှာ ထွက်ရှိထားသည့် ဖုန်းများကိုဈေးနှုန်း လျှော့ပြီးရောင်းချခြင်းပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အချို့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ အားလပ်ရက်များ တွင် ဈေးဝယ် Centre များ၌ Promotion ပွဲများပြုလုပ်ကြ ပါတယ်။ vivo တံဆိပ်ကလည်း အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းများကို ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းကထွက်ရှိခဲ့သော vivo Y28 စမတ်ဖုန်းဟာ Micro Simထည့်သွင်း အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ အရွယ်အစား ပမာဏကတော့ 137.4x68.6x9.8mm ဖြစ်ပါတယ်။ 156g အလေးချိန်ရှိတဲ့ဖုန်းပါ။ IPS LCD capacitive touchscreen ရဲ့ အကျယ် အ၀န်းပမာဏကတော့ 4.7 inchesဖြစ်ပါတယ်။ မြင်ကွင်းစွမ်းရည်အတွက် ထောက်ပံ့ပေးထားသောpixels ပမာဏမှာ540x960 ပါ။ တစ်လက်မ မှာရှိမယ့် pixel ပမာဏသိပ်သည်းဆကတော့ 216ppi ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကကင်မရာဟာ8MP စွမ်းရည်ရှိပြီး၊ ရိုက်ကူးသည့်အခါတွင် ပုံရိပ်များ ကို3264x2448 pixels ပမာဏဖြင့် ဖော်ပြပါမယ်။ ရှေ့ကင်မရာငယ်ကတော့ 5MPစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ 1080p စွမ်းရည်ဖြင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးပါက တစ်စက္ကန့် ကို30frames နှုန်းရရှိပါမယ်။ RAMပမာဏကို1GB ထည့်သွင်း ပေးထား ပါတယ်။ အများဆုံးတိုးချဲ့နိုင်မယ့် မှတ်ဥာဏ်ပမာဏကတော့ 128GB အထိဖြစ်ပါတယ်။ Active noise cancellation with dedicated mic စနစ်ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။ Chipset အမျိုးအစားကတော့ Mediatek ပါ။ Sensor စနစ်များစွာကိုလည်းသုံးစွဲနိုင်အောင်ထည့်သွင်းပေးထား ပါတယ်။
အားသွင်းအသုံးပြုနိုင်မယ့် ဘက်ထရီအမျိုးအစားကတော့ Li-Po 2100mAh ဖြစ်ပါတယ်။ 3G network တွင် အသင့်အနေအထား၌ ၄၃၀ နာရီ နီးပါးနှင့် စကားပြောဆိုချိန်အတွက် ၁၃ နာရီနီးပါးခံနိုင်စွမ်းရှိအောင် စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်ပါတယ်။
Screen - 4.7 inches
ဖုန်းကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ပေါ့ပါးစေမယ်-1Tap Cleaner Pro v2.71 (Patched) Apk
application လေးတစ်ခုပါ။နောက်ပြီး ဖုန်းဂိမ်းတွေဆော့နေတဲ့ ဘော်ဒါတို့ အဓိကဆောင်းထားသင့်ပါတယ်။ဒီ application လေးကခလုတ်တစ် ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ Cache, History နှင့် Call /Text Log များကိုလည်းရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Android ဖုန်း / Tablet ဖုန်းတွေမှာ ရှိထားသင့်တဲ့ application ကောင်းလေးတစ်ခုပေ့ါဗျာ။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဖိုင်းဆိုဒ်3.01MBဖြစ်ပြီး ဖုန်းအားလုံးမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ Screen Shot တွေနဲ့ရိုတ်ပြပေးထားပါတယ် လိုအပ်တယ်
♪ " Windows PCအသစ်သို့ ဖိုင်များရွှေ့သည့် အခါ " ♫
PCတစ်လုံးဟာဘယ်လောက်ကြာအောင် အသုံးခံသလဲ။ မီးအားဆောင့်မ၀င်အောင် စည်းနဲ့ စနစ်နဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင် မီးပျက်သွားတဲ့အခါ USPရှိလို့ စနစ်တကျ ပိတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် desktop PCတစ်လုံးဟာငါးနှစ် လောက်အထိအသုံးခံပါတယ်။ Laptop PC ကပိုပြီးပျက်လွယ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာရောင်းတဲ့ Laptopကီးဘုတ်တွေက နှစ်နှစ်ကျော်လောက်မှာ ကြွ တာများတယ်။ USP ခံစရာမလိုဘူးလို့ ယူဆတဲ့အတွက် Laptop က Motherboard ကြွတာမြန်တယ်။ မီးဆောင့်တဲ့ ရပ်ကွက်တွေဆိုရင် hard disk စောစောစီးစီးထိတယ်။
ကွန်ပျူတာချို့ယွင်းရင် အသစ်တစ်လုံးဝယ်ရမယ်။ ဒါဖြင့် ကွန်ပျူတာမချို့ယွင်းသေးရင်တော့ ငါးနှစ်လောက်နေရင် ကွန်ပျူတာအသစ်ဝယ်ရမှာ ပါပဲ။ မီးအင်မတန်ငြိမ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာတောင် hard disk ကိုငါးနှစ်ထက်ပိုပြီးအာမခံပေးတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ အခုတော့ hard disk အာမခံကစင်ကာပူမှာတောင် နှစ်နှစ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ငွေကြေးလေးအဆင်ပြေရင် လူတွေကသုံးနှစ်တစ်ခါလောက် ကွန်ပျူတာ အသစ်ဝယ် တတ်ကြပါတယ်။ OS နဲ့ ဆောဖ့်ဝဲပိုင်းအဆင်ပြေနေရင်တောင် hardware ပိုင်းကအရမ်းခေတ်နောက်ကျ ကျန်ခဲ့တာကိုး။
ကွန်ပျူတာအသစ်ဝယ်ပြီဆိုရင် ကွန်ပျူတာအဟောင်းထဲကဖိုင်တွေ ကိုကွန်ပျူတာအသစ်ထဲရွှေ့ရမယ်။ အံမယ်မင်းဒါလေးများဗျာ။ မင်မိုရီစတစ်ထဲကူးထားပြီးအဲဒီကနေ ပြန်ပြောင်းရင် ရသားနဲ့။ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆောဖ့်ဝဲသုံးပြီး ရွှေ့သလောက် စနစ်တကျမဖြစ်ဘူးပေါ့။ နောက် တစ်နည်းက Windows ထဲမှာရှိတဲ့ backup စနစ်ကိုသုံးပြီးPCအသစ်ထဲမှာနေရာပြန်ချလို့လည်းရပါတယ်။ OS versionတူရင် အဲဒီစနစ်ကအဆင်ပြေပါတယ်။ Windows XPတို့7တို့ကနေပြီးWindows 10ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင် Windows backupကနည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် တရားဝင်ဝယ်သုံးတဲ့ Windows 7/8/8+ သမားတွေကိုWindows 10ဆီအခမဲ့ upgrade လုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ အခမဲ့ရတဲ့ Windows 10upgrade ကြီးကလည်းဘယ်အချိန်အထိအခမဲ့ပြီး ဘယ်အချိန်ကျ အခပေးရမယ် မသိသေးပါဘူး။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းပေါ်မှာပဲWindows အနိမ့်တွေကနေWindows 10 upgradeလုပ်မယ်ဆိုရင် အရှင်းဆုံးနည်းကupgrade မလုပ်မီမှာဖိုင်တွေကိုback up ကြိုလုပ်ထားဖို့ပါ။ ပြီးမှ Windows 10ထဲ ပြန်ရွှေ့ပေါ့။ ကွန်ပျူတာအဟောင်းကလည်းကောင်းသေးတယ်။ Windows 10ကွန်ပျူတာအသစ်လည်း ၀ယ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် အရေး ကြီးဖိုင်တွေကိုကွန်ပျူတာအဟောင်းကနေအသစ်ဆီကိုဆောဖ့်ဝဲသုံး ပြီးအလွယ်တကူရွှေ့လို့ရပါတယ်။
ဒီကိစ္စကိုပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်အောင် Microsoft ဟာ Laplink နဲ့ပေါင်းပါတယ်။ အဲဒီိကနေတစ်ဆင့် PC move Express ဆောဖ့်ဝဲကို အခမဲ့ သုံးခွင့်ပေးပါတယ်။ အဲဒီဆောဖ့်ဝဲက အခမဲ့ ဆောဖ့်ဝဲမဟုတ် ပါဘူး။ မူလကအခပေးဆောဖ့်ဝဲပါ။ ပုံမှန်ဈေးဒေါ်လာ (၂၀) ကျပါတယ်။ အခုဒီဆောဖ့်ဝဲသုံးပြီး Windows အဟောင်း ၊ PCအဟောင်းကဖိုင်တွေကို Windowsအသစ် PCအသစ်ဆီရွှေ့ကြပါမယ်။ PC move Express ကိုwww.bit.ly/mover 380ကနေdownload ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
ဆောဖ့်ဝဲကို တစ်သက်စာအလကားသုံးရအောင် အခမဲ့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့အထိပဲအခမဲ့သုံးနိုင် မှာပါ။ ဒီဆောဖ့်ဝဲဟာ PCတစ်လုံးကဖိုင်တွေကို တခြားPC တစ်လုံးဆီအလွယ်တကူရွှေ့ယူနိုင်အောင် လုပ်ပေးထားတာပါ။ ဆောဖ့်ဝဲသုံးနေရင်း ပြဿနာပေါ်လာရင် 0800 0907694 ကိုဖုန်းဆက်ပြီး transfer assistance အကြံဉာဏ်ကိုရယူနိုင်ပါသေးတယ်။ PC mover Expressကိုသုံးဖို့ အရင် ဆုံးdownload ချပါ။ ပြီးရင် PCအဟောင်းပေါ်မှာရောအသစ်ပေါ်မှာပါ installလုပ်ပါ။ ပြီးရင် တစ်ခုတည်းသော Wi-Fi ဒါမှမဟုတ် Ethernet networkပေါ်မှာကွန်ပျူတာနှစ်လုံးကိုချိတ်ပါ။
PCအဟောင်းနဲ့ အသစ် နှစ်ခုစလုံးဟာတစ်ခုတည်းသောnetwork ပ်ါမှာရှိနေပြီဆိုရင် PC အဟောင်းထဲမှာPC move Express ကိုခေါ်တင် ပါ။ ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့ အကွက်ထဲကPC to PC transfer နေရာမှာကလစ် နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Next ကိုနှိပ်ပြီးရှေ့ဆက်ပါ။ ပြီးရင် old ဆိုတဲ့ ခလုတ်နေရာမှာကလစ်နှိပ်ပါ။ PC အဟောင်းကနေပြီးအလုပ်စလုပ်နေတယ် ဆိုတာဆောဖ့်ဝဲသိစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် Nextကိုနှိပ်ပြီးရှေ့ဆက်ပါ။ ပြီးရင် Wi-Fior Wired Networkကိုရွေးပါ။ ပြီးရင် Nextနေရာမှာကလစ်နှိပ်ပါ။ PC နှစ်လုံးကိုတစ်ခုတည်းသော Nextworkပေါ်မှာတင်လို့ အဆင်မပြေရင် data သွားနိုင်တဲ့ USB ခေါင်းကြီးနှစ်ဖက်နဲ့ ကြိုးဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာချင်းချိတ်နိုင်တဲ့ Ethernet ကြိုးနဲ့ ကွန်ပျူတာ နှစ်လုံးကိုချိတ်နိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာအချင်းချင်းချိတ်နိုင်တဲ့ USB ကြိုးကို အလွယ်တကူဝယ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကြိုးတွေကို Laplink ကနေပဲ ၀ယ်ရမယ်လို့ အ ကြပ်ကိုင်ထားတာရှိပါတယ်။
ပြီးရင် PC အသစ်ဆီကိုသွားပါ။ PC အဟောင်းမှာတုန်းကလိုဆောဖ့်ဝဲ ကိုခေါ်တင်ပါ။ ပြီးရင် Windows 8.1 or Later ခလုတ်ကိုရွေးပြီးကလစ်နှိပ် ပါ။ ပြီးရင် Next နှိပ်ပါ။ အဲဒီနေရာရောက်ရင် ကိုယ့်နာမည်နဲ့ အီးမေးလ် လိပ်စာတောင်းပါမယ်။ ပြီးရင် Wi-Fi or Wired Networkကိုထပ်ရွေးပါ။ ပြီးရင် Next ကိုနှိပ်ပြီးရှေ့ဆက်ပါ။ Network ထဲရောက်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ PC အဟောင်းကိုရွေးပါ။ ပြီးရင် browser ကိုရွေးပါ။ ပြီးရင် PC ကိုရွေးပါ။ OK နေရာမှာကလစ်နှိပ်ပါ။ တကယ်လို့ PCအဟောင်းကိုရှာလို့မတွေ့ ရင် “In progress–Network Transfer “နေရာမှာအမှန်ခြစ်ပေါ်အောင်လုပ် ထားပါ။ ပြီးရင် Rescan နရာမှာကလစ်နှိပ်ပါ။ တွေ့ပြီဆိုရင် PCကိုရွေးပါ။ Nextမှာကလစ်နှိပ်ပြီးရှေ့ဆက်ပါ။
PC mover ExpressဟာPCအဟောင်းကိုအသေအချာလေ့လာစိစစ် ပါမယ်။ အဲဒီကိစ္စအတွက် နှစ်မိနစ် သုံးမိနစ်လောက် စောင့်ရပါမယ်။ ပြီးရင် screen ပေါ်ကCategory လးမျိုးမှာတစ်ခုစီကလစ်နှိပ်ပြီးtransfer ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာစိတ်ကြိုက်ခွင်ချနိုင်ပါတယ်။ မခက်ပါဘူး။ ကိုယ် ထားချင်တဲ့ setting ကိုရွေးပေးရုံပါ။ Exclamation triangle ရှိတဲ့ ပြထားတဲ့ နေရာမျိုးတွေ့ရင် အဲဒီမှာ ပြထားတဲ့ မှတ်ချက်အတိုင်းအသေအချာလိုက် နာဖို့လုပ်ပါ။ ပြီးရင် user account selection မှာကလစ်နှိပ်ပါ။ အဲဒီအခါ PC အဟောင်းမှာလောလောလတ်လတ် သုံးထားတဲ့ Windows user accountတွေကိုတွေ့ရပါမယ်။ အဲဒီaccount က ဖိုင်တွေကိုတိုက်ရိုက်ရွှေ့ယူလို့ ရမလားဆိုတာသေချာအောင်ကြည့်ပါ။ user accountတွေကိုမတွေ့ဘူးဆိုရင် show all userနေရာမှာကလစ်နှိပ်ပါ။ account တစ်ခုကဖိုင်တွေ ရွှေ့ယူတာရပ်ချင်ရင်Edit userနေရာမှာကလစ်နှိပ်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Drive selectionလုပ်ရမယ့် ဘယ် driveတွေ ရွှေ့ယူမယ် ဆိုတာရွေးပေးရပါမယ်။ တကယ်လို့များfolderအသစ်တွေ လုပ်ပေးဖို့ လိုလာရင် driveအဟောင်းကဖိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် အခြေခံပြီးfolderသစ်လုပ်ပေးရပါမယ်။ defaultအတိုင်းထားတာကိုပြောင်းချင်ရင်ရှိတဲ့ driveတွေကို ignored or save to different placeလုပ်ရတော့မယ်။ Edit Drive နေရာမှာကလစ်နှိပ်ပြီးSetting တွေကိုပြောင်းပေးပါ။ ဘယ်လိုဖိုင်မျိုးပဲရွေးပြီးရွှေ့မယ်ဆိုတာမျိုးရှိရင် filterသတ်မှတ်ချက်ထည့်ပေးပါ။ မလိုတဲ့ ဖိုင်တွေပါမသွားအောင် ဖြစ်ပါတယ်။ temporaryနဲ့ back-upဖိုင်တွေကိုတားထားဖို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာboxတွေမှာအမှန်ခြစ်ပေါ်အောင်လုပ် ပါ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတ်မှတ်ချက်ထားချင်ရင် Add buttonနေရာမှာကလစ် နှိပ်ပါ။ ကိုယ်ပိုင် filter set-upလုပ်ပါ။ file typeနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ရွေးချင် ရာကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးနိုင်တယ်။ ပြီးရင် new target folderကိုရွေးပေးရပါ မယ်။ PCအဟောင်းကဖိုင်တွေကိုnew folderဆီရွှေ့ပေးပါလိမ့်မယ်။
Folder filterသတ်မှတ်ချက်ကိုတော့ လုပ်ပေးရမယ်။ ဘယ်ဖိုင်ပဲရွှေ့ ရမယ်ဆိုတာ ဖြစ်အောင်လို့ပါ။ ပြီးရင် အမှန်ဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးသင့်တဲ့ boxလေးတွေမှာအမှန်ခြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးရပါမယ် ။ folder ကြီးတစ်ခုလုံးရွှေ့မယ်ဆိုတာမျိုးမှာကလစ်နှိပ်ရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် အပေါင်းလက္ခဏာရှိတဲ့ နေရာမှာကလစ်နှိပ် ရမယ်။ လက်အောက်ခံ folderတွေ ၊ ဖိုင်တွေ တွေ့ရပါမယ်။ ကိုယ်ရွေးချင်တာတစ်ခုချင်း စီရွေးပြီးရွှေ့လို့ရပါတယ်။ ပြီးရင် Nextနေရာမှာကလစ်နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Next မှာကလစ်နှိပ်ပါ။ ဖိုင်တွေ ရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက် ဆောဖ့်ဝဲက ပင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ် Nextကိုနှိပ်ရင် ဆောဖ့်ဝဲစပြီး အလုပ်လုပ်ပါမယ်။ networkရဲ့ အမြန်နှုန်းနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းရတဲ့ ဖိုင်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်ပြီး ကြာချိန်အနည်းအများရှိနိုင်ပါတယ်။ အောက်ထစ် တစ်နာရီလောက်ကြာပါတယ်။ ဖိုင်တွေ ရွှေ့ ပြီးပြီဆိုရင် PCကိုrestart ပြန်ချဖို့ လိုပါတယ်။
♪ “ Sony Xperia Z5 Premium “ ♫
Sony ရဲ့ Z5 Premium မှာ အပြောင်မြောက်ဆုံးလက်ရာအဖြစ် 4K Screen ကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာ တွေ့ရ ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး အတွက် 4K အမျိုးအစား Screen ကို ပထမဆုံးအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Z5 series တွေ အတွက် အကြီးမားဆုံးဂုဏ်ယူစရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Z5 series တွေထဲမှာ အရွယ်အစားအကြီးဆုံး Z5 Premium ဟာ Screen အဆင့်မြင့်ရုံသာမကဘဲ ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ ဒီဇိုင်း၊ ကင်မရာနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ပါဝင်တာမို့ Top-end flagship တွေထဲမှာ နေရာဝင်ယူထားနိုင် တာဖြစ်ပါတယ်။ Z5 Premium ဟာ Nano-SIM အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး 4G ကွန်ရက်ထိချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ Fingerprint sensor ကို ကောင်းကောင်းအသုံး ချနိုင်ပြီး အားသွင်းချိန်မြန်ဆန်တာကြောင့် မိနစ် ၃၀ အားသွင်းရုံနဲ့ ၆၀% အားပြန်ဖြည့်ပေးပါတယ်။ ဘက်ထရီ ဟာ ဖြုတ်/တပ်လို့မရတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Z5 Premium မှာ IR Blaster control လည်း မပါဝင်တာ တွေ့ရပါတယ်။
Z5 range တွေထဲမှာ အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပြီး Z5 Premium ဟာ အရင် Z5 ထက် အရွယ်ကြီးမားအောင် ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းရော စတိုင်တွေကအစ Z5 နဲ့ အတော့်ကိုတူပါတယ်။ Xperia Z5 နဲ့ Z5 compact တို့လိုတော့ Frosted Glass ကို ကျောပြင်မှာမတွေ့ရတော့ဘဲ မှန်တစ်ချပ်လို တောက်ပနေတဲ့ ဖန်သားပြင်မျိုးကို ပြောင်းလဲထားပါတယ်။ Xperia Z3+ လိုပဲ သတ္တုဘေးဘောင်နဲ့ အလှဆင်ထားပြီး ခံ့ညားလှပတဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Z5 Premium ကို အနက်ရောင်၊ ရွှေရောင်နဲ့ ငွေရောင် တို့ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ရေစိုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ အလူမီနီယမ်ကိုယ်ထည်ကြောင့် Z5 Premium ဟာ အလွန်ကြွားဝါနေပြီး ဘေးထောင့်တွေကိုလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ညာဘက်ခြမ်းအလယ်နားမှာ Power ခလုတ်ကိုတွေ့နိုင်ပြီး နှစ်ချက်ဖိနှိပ်ရုံနဲ့ Fingerprint စနစ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Power ခလုတ်ရဲ့အောက်မှာ ကင်မရာခလုတ်ကိုတွေ့နိုင်ပြီး အပေါ်ဘယ်ဘက် နားလောက်မှာတော့ အဖုံးလေးတစ်ခုပဲပါဝင်နေတာ မြင်နိုင်ပြီး သုံးရတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ Z5 ထက် ပိုမို ထူပြီး 7.8mm အထူရှိပါတယ်။
Z5 Premium မှာ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်အဖြစ် 4K screen ပါဝင်ပါတယ်။ Z5 ထက် ပိုမို အဆင့်မြင့်လာတဲ့ မျက်နှာပြင်ဟာ ၅.၅ လက်မအရွယ်ရှိပြီး 2160×3840 pixels ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးရှိပါ တယ်။ ရုပ်ထွက်သိပ်သည်းဆကလည်း အံ့အားသင့်စရာကောင်းပြီး 806ppi ထိ မြှင့်တင်ပေးထားပါတယ်။ IPS LCD Display ဖြစ်ပြီး Scratch-resistant galss နဲ့ မျက်နှာပြင်ကို ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။
Android OS 5.1.1 (Lollipop) သုံးနိုင်ပြီး 6.0 (Marshmallow) ထိ upgrade လုပ်နိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ Z5 ဖုန်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့ IMX 300 sensor ပါဝင်ပြီး ကျောဘက်ကင်မရာဟာ 23MP အရည်အသွေးရှိပါတယ်။ LED flash မီးသုံးနိုင်ပြီး 4K ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ရှေ့ဘက်မှာလည်း 5.1MP ကင်မရာနဲ့ Full HD ဗီဒီယိုရိုက်နိုင်ပါတယ်။ Z5 Premium ကင်မရာမှာ 5X zoom feature အသစ်ပါဝင်လာပြီး ရုပ်ပုံကောင်းကောင်း ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
Z5 Premium ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာမြင့်မားပြီး Qualcomm Snapdragon 810 Octa-core processor က အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ 3GB RAM ထည့်သွင်းထားပြီး ဂရပ်ဖစ်ဟာ Adreno 430 ပါဝင် ပါတယ်။ ဖုန်းတွင်းသိုလှောင်မှုပမာဏ 32GB ရှိပြီး 200GB အထိ microSD နဲ့ တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။ ဖြုတ်/တပ်လို့မရတဲ့ဘက်ထရီဟာ Li-ion 3430mAh ပမာဏရှိပြီး Quick Charge 2.0 ကြောင့် အားသွင်း ချိန်မြန်ဆန်ပါတယ်။
Display : 5.5 inches, IPS LCD capacitive touchscreen Memory : 32 GB, 3GB RAM, microSD, up to 200GB Camera : 23 Megapixel, phase detection autofocus, LED flash OS : Android OS v5.1.1 (Lollipop) Phone : 09-253230212 (Sony Showroom)
Price : 970,000/-
▼ 2015 ( 5314 )
▼ December ( 458 )
♪ ကွန်ပြူတာမှာ Myanmar Font & Keyboard လိုအပ်နေသူမ...
Happy New Year 2016 နှစ်သစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Live...
♪ ကာစီနို လောင်းကစားဂိမ်း - Slots Free Casino Hous...
♪ ချစ်စရာဟန်းဆက်သေးသေးလေး - “ Mini GSM Handset “ ♫...
USB ကို Click တစ်ချက် ထဲနဲ့ စိတ်ချစွာ ဖြုတ်နိုင်မယ...
Adobe AIR 20.0.0.233 Offline
♪ “Google ထံမှ မျှော်လင့်ရမည့် စမတ်ကျကျ Messaging ...
♪ ဖုန်းခေါ်ဆိုသူရဲ့ပုံကို Screen အပြည့်မြင်တွေ့ရမယ်...
♪ “MPT၏ ထပ်ဆောင်း ၀န်ဆောင်မှုများပေးရန် ကုမ္ပဏီ ၃ ခု...
♪ “Samsung Gear VR အား ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၅ မှစ၍ ၁၁...
♪ ဖုန်းထဲမှာ Video & Music များကိုကြည့်ရှုနားဆင်နိ...
♪ Facebook Local Awareness Ads ကို အသုံးပြု၍ ပြည်တ...
♪ Google က Password အစား ဖုန်းကို အသုံးပြုနိုင်သော...
♪ Gionee က အရွယ်ကြီး ဘက်ထရီပါသော Marathon M5 Plus ...
♪ Mobile Guide Issue Vol-3 ၊ Issue-035 (28.12.15) ...
♪ Digital Life Journal Issue Vol-4 ၊ Issue 35 (28....
♪ “ ZTE မှ Axon MAX အား ကြော်ငြာ “ ♫
♪ လက်မခံချင်တဲ့ ဖုန်းနဲ့Message တွေကိုဝင်မလာအောင်ပ...
♪ " မထူးသော်လည်း ဆန်းသည့် Acer Aspire Switch 10E "...
♪ “Samsung Galaxy A9” ♫
♪ “OPPO ရဲ့နောက်ထပ်မျိုးဆက်သစ်R7sကိုလေ့လာကြည့်လိုက...
♪ “Samsung Galaxy Note 5” ♫
♪ " Huawei Ascend Mate7" အကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြခ...
♪ LG က G Pad II 8.3 ကို ကြေညာ ♫
Smart-7 Mobile Service&Training Centre >> (Class B...
မြောက်လက်ဝှေ့ထိုး apk 16mb
♪ လူဆိုးဂိုဏ်းတွေနဲ့အပစ်အခက် Action Game -Sniper F...
♪ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြုတ်တပ်လဲလှယ်နိုင်သော Fairphon...
♪ Microsoft က ဖုန်းအဟောင်းများအတွက် Windows 10 Mob...
♪ လေချွန်သံကြားရင် အသံမြည်ပြီး တည်နေရာကိုအချက်ပေးမ...
♪ “Zendure A8 Pro (သို့)အကောင်းဆုံးPower Bank” ♫
♪ “အွန်လိုင်းကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချနည်း” ♫
♪ “စတိုင်သစ်နဲ့ ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်းဝင်ရောက်လာေ...
♪ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်မှုရှိတဲ့ - “Meizu M2 note” ♫
Iobit Driver Booster Pro 3.1.1.457 Final Full Seri...
♪ “Xiaomi Redmi Note 3” ♫
♪ ZTE က ခြောက်လက်မ Axon MAX ကို ကြေညာ ♫
Looney Tunes Dash v1.62.21 APK Game
♪ ဖုန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ - M...
♪ “Xiaomi က Redmi Note Prime ကို ကြေညာ” ♫
♪ လုပ်ဆောင်ချက်များအဆင့်မြင့်ပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာေ...
♪ Facebook မှ Apps များက သင့်ကိုယ်စား ပို့စ်တင်ခြင...
ကွန်ပျူ တာကို သွက်လက်မြန်ဆန်စေမယ့် CCleaner
ဓါတ်ပုံတွေကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျကျ ဖန်းတီးနိုင်တဲ့-...
ES File Explorer Pro MOD + Cracked APK